Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo dalka ka Mamnuucay Shirkadda DP World | SAHAN ONLINE
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo dalka ka Mamnuucay Shirkadda DP World
MUQDISHO – Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa maanta isku raacay xeer dalka looga mamnuucayo shirkadda DP World kaddib markii ay si bareer ah uga soo xadgudubtay Madax-bannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Xildhibaanada oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa ,waxaa soo xaadiray 170 Xildhibaan,waxaana kulanka looga dooday xeer uu soo diyaariyay Baarlamaanka oo ku saabsanaa heshiiskii dekadda Berbera iyo shirkadda DP World.
Xeerkan ayaa ,waxaa ansixiyay 168 Xildhibaan,halka hal Xildhibaan uu diiday,mid kalena uu ka aamusay,sidaas ayuu guddoomiyuhu ugu dhawaaqay in uu ansax yahay.
Sharcigan ayaa wax kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka carabta ee DP World.
Sidoo kale sharcigan ayaa ka mamnuucaya shirkadda DP World gebi ahaanba dalka Soomaaliya.
Sharcigan waxa uu sheegayaa in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiis caalami ah.
Sharcigu waxa uu ku eedeeyey shirkadda DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda,madaxbannaanida,midnimada iyo bedqabka waddanka.
Sharcigan ayey tahay in uu ansixiyo Aqalka sare ee Baarlamaanka kadibna waxay u tegi doonaa Madaxweyne Farmaajo si uu u ansixiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sharci darro ku tilmaamtay heshiis ay wada galeen Somaliland,DP World iyo Itoobiya oo ku saabsanaa dekedda Berbera,halka Somaliland ku adkeysatay in ay xaq u leedahay inay gasho heshiiskaas.
Hoos ka akhriso Xeerka